Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Robin van Persie Child Story Plus Na-emeghị Ihe Nkọwa Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Onye na-efe Dutch'. Robin van Persie Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke akụkọ banyere Arsenal na Man United na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya, na ọtụtụ OFF-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ihe mere eme nke mbụ ya mana ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Robin van Persie nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Robin van Persie Akụkọ nwata - Mmalite na Ezinụlọ:
Robin van Persie mụrụ na 6th nke August 1983 na Rotterdam, Netherlands. A mụrụ ya nne ya, José Ras van Persie na nna ya, Bob van Persie. Ndị nne na nna gbara alụkwaghịm mgbe ọ bụ nwata.
Robin sitere na ezinụlọ nwere nkà. José Ras, nne ya, bụ onye na-ese ihe na ọla. Ọ na-akuzikwara ụmụaka mkpa pụrụ iche. Bob, bụ nna ya, bụ ọkachamara n’ịkpụ ihe.
Mgbe a na-etolite na Rotterdam, a maara Van Persie dịka "nwatakịrị na-akpata nsogbu wị hụrụ ihe ọ bụla ọzọ ma football”. Mgbe nne na nna Van Persie gbara alụkwaghịm, nna ya zụlitere ya.
N'ụlọ akwụkwọ, Van Persie bụ otu n'ime ụmụaka kacha akpa agwa. E wepụrụ ya na klaasị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị. N'ezie, ọ bụghị ụdị agụmakwụkwọ. Ndị nkụzi ya gwara ya mgbe niile: "Robin, mee ihe omume ụlọ akwụkwọ gị, ọ dị mkpa na ị nwere diploma".
Otú ọ dị, Nwa okorobịa Robin gere ntị n'olu ndị ọzọ site na ndị agbụrụ ya nke kwuru…“You're ga-adị ka Johan Cruyff”. Nke a mere ka ndị nkụzi ya nwee mwute na ya Omume nke gosipụtara iwe zuru oke n'ebe ndị gụrụ akwụkwọ nọ.
Papa ya adịghị echegbu onwe ya banyere omume nwa ya. Anyị na-agwa gị ihe kpatara ya!. Rob van Persie maara na football bụ ọkpụkpọ nwa ya nwoke tupu a mụọ ya. Ọ sịrị, "ọbụna ọ bụ ezie na ọ hagụọ akwụkwọ, akara aka ya ga-emezukwa. ”
E debere Robin na nsogbu karịa ka ọ gaara abanye n'ihi agụụ ya maka bọl. Site na 1997 ruo 1999, ọ gbara maka Excelsior dị ka nwata. Nkà ihe ọmụma nke Excelsior bụ ịmeghachi bọọlụ n'okporo ámá.
Ha hapụrụ ụmụaka ka ha gwuo egwu na-enweghị oke nnyonye anya. Clublọ ọrụ ndị nkuzi na-arụsi ọrụ ike na ụkwụ aka nri Van Persie na isi. Urtzụlite nkà ndị a chọrọ igwu n'okporo ámá nke Kralingen, agbata agbụrụ dị iche iche n'ebe ọwụwa anyanwụ Rotterdam ebe ọ tolitere na ebe nna ya ka bi.
Robin ama ama ọfọn ama ke eto emi enye ọkọdọhọde ke n̄kponn̄kan akparawa. Ndị isi ụlọ ọrụ dị iche iche ga-akpọ aha ha mgbe ha gachara ya na Stadium nke 3,500, Woudestein na Rotterdam.
Kemgbe afọ 11, Robin ama etolite na-akwado Arsenal niile maka nna ya bụ onye na-akwado ọnwụ Arsenal. N'okpuru ebe a bụ foto nke ya.
Mgbe ọ dị afọ 13, Van Persie nabatara stardom na ala nna ya na ndị na-ekiri ya na-anọgide na-eji ya tụnyere akụkọ Holland bụ Johan Cruyff. Nke a mere ka enwekwu mmasị maka egwuregwu ahụ ka ọ na-ese ntutu ya ka ọ dị ka bọl.
Onye Dutch nwere nkà sonyeere Feyenoord kasị ukwuu na Holland mgbe ọ dị afọ 13 iji nwee ike ịchọta nrọ ya, ma ọ ghọrọ onye iro ya kacha njọ. Ihe omume ya n'ọhịa dị ụkọ. N'ikwu nke a, nganga ya na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị gosipụtara nkà ya. Mgbe van Persie gbara afọ iri abụọ, Feyenoord chụpụrụ ya.
Mgbe Robin hapụsịrị ụlọ ọrụ ahụ, Robin nọgidere na-enwe nkà dị mma n'okporo ámá nke Kralingen n'ụlọ ikpe dị iche iche nke nwere nnukwu ogige dị na ya. 'onu.'
Luck na-enwu na ya ka ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ wee bụrụ nhọrọ mbụ nke Arsenal scout nke onye ọkpụkpọ nke ga-anọchi Bergkamp mgbe ọpụpụ. Enyere Van Persie ọrụ ịmalite igwu egwu n'akụkụ Henry dị ka onye na-egbu ihe nke abụọ.
Ọnye na-bụ Bouchra Elbali? Nwunye Robin van Persie:
Robin van Persie nhọrọ nke nwunye ka na-agbagha ọtụtụ n'ime ndị Fans ya. Ọ na-alụ ugbu a na mma Moroccan, Bouchra Elbali.
Di na nwunye a nwere umuaka mara nma abuo, nwa nwoke aha ya Shaqueel na ada Dina. Nke a bụ Bouchra Elbali van Persie na ụmụ ya.
dị nnọọ ka Anthony Martial na Philippe Coutinho, Robin van Persie lụrụ di mgbe ọ dị afọ 20. Ọ bụ ezie Bouchra van Persie na di ya, kpakpando bọl Robin van Persie, nwere mmalite mmalite dị egwu na alụmdi na nwunye ha n'ihi ebubo mmeko nwoke (nkọwa dị n'okpuru).
Ha lụrụ naanị otu afọ na mgbe ahụ, Bouchra tụlekwara ịhapụ di ọhụrụ ya. Kaosiladị, ọ kwụgidere ya ma ugbu a di na nwunye ahụ esila na obi mgbawa pụọ.
Mgbe ọ hụrụ na nwunye ya bụ onye Alakụba, onye nta akụkọ jụrụ Robin otu oge ma ọ bụrụ na nke a emeela ka ọ gbanwee Islam, Van Persie kwuru,
“Ọ bụghị eziokwu. Abụghị m onye Alakụba, ma ọ bụ Onye Kraịst ma ọ bụ onye Juu. A zụlitere m n'ụba. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye Alakụba, o kwesịrị isi n’obi gị. Agaghị m eme ya naanị iji mee nwunye m obi ụtọ. Ikwere na m bụ ọchịchọ nke ịbụ ezigbo mmadụ. ”
Bouchra van Persie bụkwa onye na-egwu egwú ma hụ abụ abụ na Dutch.
Ọ na-enwe obi ụtọ maka di ya maka ihe ndị ọ rụzuru na football. Ibe ya Twitter juputara na posts na-eto di ya.
Mgbe ọ nọ na Arsenal, Mirror gbara ajụjụ ọnụ. Ọ sịrị, "Ezi onye agha kwesịrị ichegbu onwe ya maka ụlọ ọrụ ahụ, banyere ìgwè, banyere ihe niile gbasara Arsenal. Oh, na ugbu a, a na-akwalite m ka m 'lụọ nwunye'. "
N'okpuru mgbasa ozi ya, ọ na-akọwa onwe ya dika, "Mama nke ụmụ abụọ mara mma na nwunye dị mpako nke di di egwu." Van Persie kpughere na nwa ya nwoke kpọrọ ya 'papa Arsenal' n'oge ya dịka Gunner, nke nwere ike inwe nsogbu ụfọdụ mgbe ọ gbanyechara na United ikpeazụ.
Robin van Persie Untold Biography - Nwa Na-ebe ákwá:
Robin van Persie Turkish club Fenerbahce ozugbo akwụ ụgwọ maka a Manchester United onye ofufe, Louis Diamond, ka ọ gbaga Istanbul iji zute ya mgbe vidiyo nke nwatakịrị na-ebe ákwá na akụkọ banyere ọpụpụ Dutch nke Old Trafford malitere ịrịa. N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi foto nke Little Louis Diamond na-ebe ákwá maka Robin van Persie.
Vidio ahụ, ndị nne na nna Diamond, gbara ndị na-akwado Fenerbahce ntị bụ ndị malitere otu mkpọsa n'ịntanetị iji bulite $ 2000 (£ 1,281) na July nke mere na Louis nwere ike ịnweta ohere ya na arụsị ya.
Ihe osise a chọtara onye isi Fenerbahce Aziz Yildirim onye mechara kpebie ịkpọ ndị Diamond ezinụlọ na Turkey. A nabatara ọkpụkpọ oku Yildirim na ha bịarutere Istanbul na mgbede Tọzdee ka ndị ọrụ Fenerbahce TV kelere ya.
Ochicho dakwasiri ya ozo dika onye isi oche Fenerbahce, Ilhan Eksioglu, nwere ihe ijuanya ozo. Ọ na-edebanye ezinụlọ ezumike ezumike ụbọchị ise n'otu ebe ezumike ezumike na-ewu ewu n'oge ezumike Antalya.
"Anyị chọrọ ekele Fenerbahce na onyeisi oche maka ime ka nke a mee. Anyị enweghị ike ichere ịhụ Robin van Persie egwu, " kwuru na nna Samal bụ Sam mgbe ọ rutere Istanbul.
Robin van Persie Ezinụlọ:
Robin van Persie sitere na ndị ezinụlọ Dutch na-etolite tupu a kwụọ ụgwọ ụlọ football maka ya na ezinụlọ ya. N'ebe a, anyị na-enye gị nkọwa gbasara ndụ ezinụlọ ya na-amalite site na nna ya, ROB van Persie. Zute nna Robin van Persie- Rob van Persie.
NME: BOB van Persie bụ nwoke kwenyere na amụma. O kwuru na tupu a mụọ Van Persie, onye na-akọwa ihe gwara ya ihe nwa ya nwoke ga-eme iji nweta:
“Ọ gwara m na ụlọ akwụkwọ agaghị enwe mmasị na ya mana, mgbe a bịara n'egwuregwu, na ọ ga-abụ eze na Ferrari n'ọhịa. Na ọ ga-anọ n'òtù ndị otu mba Dutch ” BOB kwuru na a Akụkọ mgbede nke Manchester News.
Bob van Persie bụ onye na-akwado ọnwụ Arsenal. O nwere otu mpempe akwụkwọ ọkpụkpụ ya n'ime Emirates Stadium nke o mere site na magazin ochie nke Arsenal. Ma nna ma nwa yiri ka ha dị ezigbo nso.
Nne: José Ras van Persie nke dị n'okpuru ebe a bụ ọmarịcha nne nke Legendary van Persie. Zute José Ras van Persie.
Ọ sonyeere mkpu maka nwa ya ka ọ nọrọ na Arsenal. N'okwu ya…
“Mgbe anyị gara Arsenal na anyị soro ya banye n’ọgbọ egwuregwu, ọ na-enwu ọkụ. Dika mum, nke ahu juputara na nganga. Ọ dị ezigbo egwu.
Mgbe nna nna Robin, nna m, gafere Emirates maka ụbọchị ọmụmụ ya (91st) na anyị na-ese foto n'ime ya, anụrụ m ka ndị toro eto nọ n'azụ m na-ekwu: 'Anyị hụrụ Robin n'anya'. Dị ka mum, enweghị m ike ịchọ inweta ihe ka mma. ”
SISTERS: Kiki na Lilly van Persie bụ ụmụnne nwanyị abụọ nke Robin van Persie. Onye amụma ahụ gwara nna ha, Rob, na ọ ga-enwe ụmụ atọ, nke mbụ ụmụ nwanyị abụọ na nwa nwoke.
Ọ bụ Kiki na Lilly bịara na nke abụọ tupu Robin abịa nke atọ. Zute ụmụnne nwanyị Robin van Persie- Kiki na Lilly van Persie.
Robin van Persie Mmekorita ebubo:
Otú ọ dị, na 2005, A jidere Pers Pers na-enyo enyo n'ike. Nke a mere mgbe otu ịgba egwu egwu ịgba egwu na-ekwu na ọ wakporo ma dinaa ya. Robin van Persie kwetara na ọ na-enyocha ụlọ nkwari akụ na onye na-egbu ihe ma gọnahụ na mmeko nwoke ahụ mere.
Ihe merenụ mere na The Tulip Inn na Rotterdam, naanị 200 kaadị si ebe nwunye ya bụ Bouchra nọ na-ehi ụra. Oge a bụ oge ọ na-akọrọ ihe kachasị nke ọrụ ya.
Nke a bụkwa afọ mbụ a họọrọ ya ka ọ bụrụ akụkụ nke ndị otu mba Netherlands. Ihe mmeko nwoke ahụ mere otu afọ mgbe ọ lụsịrị Bouchra na 2004.
Ndị ọchịchị Dutch adịghị mfe. A tụbara Van Persie n'ụlọ mkpọrọ maka izu 2 mgbe ikpechara ya. Emechara chaja chaja ahụ mgbe ndị ọchịchị lere omume ahụ anya dị ka nkwenye.
Ọnọdụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịlụ ya na alụmdi na nwunye ya na ọrụ ya, mana nwatakịrị ọjọọ nke soccer mechara kpebie na o zuru ezu, na-edozi echiche ya banyere nwunye ya, ndị otu na ndị nkuzi ya.
Robin van Persie alitydị:
Robin van Persie nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ajọ: Orara, adighi ntụkwasị obi, Onye mpako, onye isi ike na onye na-eche naanị maka onwe ya.
Ihe RVP nwere mmasị: Ụlọ ihe nkiri, na-eme ememe, ihe dị oke ọnụ ma na-enwe obi ụtọ na ndị enyi
Ihe RVP achọghị: N'ịbụ onye a na-eleghara anya, Ọ bụghị ịga n'ihu, na-eche eziokwu siri ike, na a dịghị emeso ya dị ka eze ma ọ bụ eze nwanyị.
Ihe nlereanya: Ọ na-akwado Thierry Henry, Dennis Bergkamp na Marco van Basten dị ka ụfọdụ n'ime isi ihe ndị metụtara ọrụ ya.
Karịsịa, Robin bụ onye egwuregwu gburugburu. Ọ bụ onye ofufe nke darts na tenis. Ọ nwere otu talent maka tennis tennis. Ọ bụ onye na-akwado ihe nkiri Al Pacino dị egwu na Scarface.
Eziokwu Robin van Persie - Ọnwụ Egwu Maka Ezinụlọ:
Mgbe a mara ọkwa na Van Persie na-akwụsị ọrụ ndị London maka Njikọ ha, ọtụtụ ndị boro nwunye ya ebubo na ha bụ ndị na-agba ọlaedo.
Otu tweet bụ, "Ọ bụrụ na m nwụọ. Akpọrọ m gị asị, ị na-achọ ịcha. Echere m na ezinụlọ gị nile ga-ada n'ala nwụọ. "
Nke a abụghị oge mbụ Robin chere egwu egwu. N'oge ọ bụ nwata, Robin na ezigbo enyi ya, Jorge Acuna wakporo ndị hooligans site na Ajax. A kpọgara Jorge Acuna n'ụlọ ọgwụ nwere isi, olu na ọgịrịga ya. Nwa okorobịa van Persie nwere ihu ọma ka agbanahụ na a ga-eti ya ihe ahụ.
Robin van Persie Biography Eziokwu - Ihe mere n'aha aha ya:
Na 13 June 2014, Holland nyeere ndị Spain aka na-emeri 5-1. Na ụbọchị ndị sochirinụ, onyinyo ahụ na-achịkwa akwụkwọ akụkọ, mgbasa ozi ọha na eze na telivishọn bụ nke Robin van Persie kwụsịtụ ụgbọ elu. Nke a kpatara aha ya “Nwoke Dutch ahụ Na-efe Efe”.
Ụgbọ elu ya mere nke ọma mgbe ọ gafere bọl ahụ ga-eti Iker Casillas ma mepee Dutch agbado.
Ọ bụ egwuregwu dị egwu nke egwuregwu na-eweta otu n'ime ihe mgbaru ọsọ kachasị mma na akụkọ ihe mere eme World Cup. Nnukwu aka dị ukwuu na football nke oge a bụ ihe na-esochi mgbe ọ gbasịrị mgbaru ọsọ.
Ihe mgbaru ọsọ nke otu na nke a na-eji aka ya kwụ ọtọ van Gaal
Eziokwu Robin van Persie - Otu Man si ghara ịbanye ya:
United nwere ike ịbanye na Van Persie na 2001 mgbe Sir Alex Ferguson zigara Jim Ryan ka ọ na-ele ya anya - naanị maka ịchụpụ onye nọ n'afọ iri na ụma. "Robin bụ naanị 16 ma ọ bụ 17 n'oge ahụ," ka Ferguson kwuru.
Onye isi ụlọ ọrụ Manchester United na - ekwu na onye na - ahụ maka Jim Jim hụrụ na Robin bụ talent dị egwu. Ma chere na ọ bụ obere nwa ọhụrụ maka 16 afọ. N'ezie, o nwetara kaadị uhie n'ụbọchị Jim bịara ile ya anya na stadium. Fergie mechara kwaa ụta na ọ bụghị ịzụ ya ogologo oge mgbe Arsenal rụsịrị ohere.
Ihe mere o jiri jiri Shirt Nọmba 20 maka United:
Ọ nwere nhọrọ iyi nọmba 20 ma ọ bụ 21 mgbe mbụ ọ kwagara Manchester United. N'okwu Robin van Persie…
“Ihe mere m ji were uwe elu a bụ na anyị niile nọ ebe a iji merie afọ a na nke ahụ ga-apụta aha nha nke iri abụọ na Manchester United. Nke ahụ bụ isi ihe mere m ji were 20, ”ọ kọwara n'oge ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Robin van Persie Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.